Waxaan horey u ogaanay faahfaahinta ugu horeysa ee OnePlus Smart TV | Androidsis
Eder Ferreno | | OnePlus, Qalabka kale
OnePlus Smart TV ayaa laga hadlay bilo, taas oo ugu dambayn suuqa soo gali doonta deyrtan, sida dhawaan la xaqiijiyay. Nooca Shiinaha ayaa sidaas ku galaya qayb cusub oo suuq ah, oo si cad u kala duwanaanaysa ganacsigeeda. Maamulaha guud ee shirkadu wuxuu horey usheegay inaan iska horkeen doonno TV qaali ah, oo leh qeexitaano wanaagsan.
Dhowr nooc oo qayb ahaan hadda la sii daayay. Marka waxaan horeyba u ogaan karnaa faahfaahinta koowaad ee ku saabsan OnePlus Smart TV. Marka waad garan kartaa waxa aad ka filan karto marka si rasmi ah looga bilaabo suuqa laba bilood gudahood.
Shirkadda waxay ka wadaageen dhowr faahfaahin oo ku saabsan TV-gaan. Waxaa la filayaa inuu cabirkiisu yahay 55 inji, oo ka mid ah kuwa toddobaadkan la soo sheegay. Sidoo kale, waxay umuuqataa inaan awoodno kafilo OnePlus inuu adeegsado tikniyoolajiyadda QLED guddigaan. Tani waxay ahayd wax dhowaan la isla dhexmarayay, waxayna umuuqataa in qaabkan lagu xaqiijiyay.
In kasta oo ay weli hadal hayaan in TV-gan sumadda leh lagu bilaabi karo cabbirro kala duwan. Moodooyinka ku jira 43, 65 iyo 75 inji ayaa la sheegay, marka lagu daro 55 inji oo la sheegay. Ma naqaano haddii ay noqon lahaayeen qaabkan, mise iyagu waa telefishannada kale ee casriga ah ee ay soosaaraha Shiinaha ka shaqeeyaan hadda
Dhinaca kale, OnePlus wuxuu horey u xaqiijiyay inuu la imaan doono Dolby Vision kiiskan. Daadadka cusub waxay xusayaan inay adeegsan doonaan processor-ka MediaTek MT5670. TV-ga Android-ka ayaa loo isticmaali lahaa inuu ku shaqeeyo, inkasta oo ay ku imaan laheyd nooc wax laga beddelay, oo ku saleysan Android Pie.
Nasiib wanaagse, sugitaanku wuu ku yaryahay arrintan. OnePlus wuxuu ku soo bandhigi doonaa Sebtember 26 gudaha Hindiya, halka Oktoobar 10 ay jiri doonto dhacdo bandhig caalami ah oo telefishankan ah. Daahfurka ayaa dhici doona inta lagu jiro deyrtan. In kastoo ay tahay inaan dhowr toddobaad sugno si aan u helno faahfaahinta gaarka ah ee ku saabsan imaatinkiisa suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee OnePlus Smart TV
EMUI 10 waxay cusbooneysiineysaa barnaamijka kaamirada ee Huawei
Redmi Note 8 Pro waxay la imaan doontaa qaboojiye dareere ah